कता हराए प्रचण्ड ? - नेपालबहस
कता हराए प्रचण्ड ?
२७ पुष २०७७ | १२:२१:५४ मा प्रकाशित
२७ पुष, काठमाडौं । मुलुक राजनीतिक रुपमा संकटग्रस्त बनेका बेला प्रमुख खेलाडी मध्येका एक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने यतिबेला गुमनाम छन् । गएको एकसाता अघि उनी पत्नी सीताको उपचार गर्न भारतको मुम्बै गएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । त्यसयता भने प्रचण्ड लापता छन् ।
जानकार स्रोत भन्छ– प्रचण्ड अहिले पशुपतिको दर्शन खुद्राको व्यापार गर्दैछन् । अर्थात उनी पत्नीको उपचारसँगै भारतीय नेताहरुसँग गोप्य भेटघाट गरिरहेका छन् । दुई छोरीसहित मुम्बै पुगेका प्रचण्ड गएको विहीबार नयाँदिल्ली पुगेका छन् । उनले एसडी मुनिका साथै कर्णेल अशोक मेहतासँग भेट गरेका छन् । साथै, भारतीय काँग्रेस र भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुसँग पनि उनले भेटेको स्रोतको दाबी छ ।
भेटका बेला प्रचण्डले सबैसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी भित्र एकलौटी गर्न लाग्दा आफूलगायत वहुमतले प्रतिरोध गर्दा परिस्थिति जटिल बनेको जानकारी दिएका थिए । साथै, ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर लोकतन्त्र नै धरापमा पारेकाले भारतले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
ओलीले विघटन गरेपछि भारत सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएकोछैन । विदेश मन्त्रालयले भने विघटन लगत्तै नेपालमा भइरहेका घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालीरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
ओलीलाई हटाउने छौंः नेपाल ३ घण्टा पहिले
ओलीको सेटिङले ल्याएको तरंग ५ घण्टा पहिले
बजार वृद्धि हुँदा पनि किन भयो मैनवत्ति रातो ? हेरौ आजको बजार विश्लेषण ७ मिनेट पहिले
अब बजारमा कुन कम्पनीले निष्कासन गर्दैछ आईपीओ ? ३३ मिनेट पहिले
आज पनि सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा, बहस पुनः मंगलबार पनि ५१ मिनेट पहिले
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओ भर्ने भोलि अन्तिम दिन ! ५९ मिनेट पहिले
रविभवनमा रहेको सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा आगलागी ३ घण्टा पहिले
आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने निर्वाचनकाे तयारी शुरु २० घण्टा पहिले
निर्वाचन कार्यालय मोरङ आवश्यक तयारीमा जुट्याे ८ घण्टा पहिले
अस्थायी मोटरेबल पुल बनेपछि गाउँगाउँमा आम्दानी भित्रिने ६ दिन पहिले
अब युट्युबबाटै किनमेल गर्न सकिने १ दिन पहिले
ताचै जङ्गलमा लागेको आगो निभाइँदै १ दिन पहिले
चिकित्सा कोषबाट तीन स्वास्थ्यकर्मी पुरस्कृत गरिने ६ दिन पहिले
नेकपाको निर्णायक भीडन्त केन्द्रिय कमिटीमा : एउटा बालुवाटार, अर्को बबरमहल ! ४ हप्ता पहिले
वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका घटना बढ्दै ६ दिन पहिले
कमलादीमा ओली पक्षको वृहत् भेला : कालो मास्क र गलबन्दी फुकालेर मात्रै प्रवेश २ हप्ता पहिले
खोला र नदीको डिलमा सधै हेपिएको एउटा समूदाय २ हप्ता पहिले
संसद विघटनको सिफारिस विरोधमा तीन बजे माइतीघरमा प्रदर्शन गरिने ४ हप्ता पहिले
अघिल्लो आर्थिक वर्षको बाँकी बजेट योजनामा बाँडफाँड १ हप्ता पहिले
कालापानीबाट सैनिक फर्काउन भारतसँग नेकपा नेता शर्माकाे माग ७ महिना पहिले
लकडाउनमा मदिरा बिक्री गर्ने तीन प्रहरी नियन्त्रणमा ७ महिना पहिले
छोरा मलेसियाको जेलमा, नेपाल ल्याइदिन आमा र परिवारको आग्रह २ वर्ष पहिले
आज पनि ठूलो पानी पर्ने संभावना ५ महिना पहिले